Indlela ukuze alulame izithombe for iPhone kusukela Backup iTunes
Wake wabhekana simo: IPhone wami ephukile, futhi Anginayo kwenye idivaysi Apple esandleni ukuthi angakwazi ukubuka izithombe, akhawunti yami ICLOUD ayinazo izithombe kanye. Ngenhlanhla, Engiye evumelanisiwe ne iTunes izolo. Ngakho kanjani I alulame izithombe kusukela iTunes emuva-up?
Apple ayisekeli ukuthola idatha kusuka iTunes isipele, ungangena kuphela lokho ukuvumelanisa. Kodwa manje singa uthole usizo software ezinye 3rd party.
iOS Data Recovery iyinhlangano kuya ekusetshenzisweni lula software eziqeqeshiwe futhi ezingasetshenziswa kahle ukuba uthole idatha iTunes isipele. It ongavusa ilahlekile noma ususiwe 12 izinhlobo idatha: othintana, imiyalezo, Call umlando, ikhalenda, Amanothi, Isikhumbuzi, Safari isibekisombhalo, Camera Roll, Photo Library, stream photo, Okunamathiselwe Umlayezo, Memos Voice, njll.
Lokhu cala version ezamahala Thwebula ngezansi bese uyifake kwi computer yakho.
Indlela ukuze alulame izithombe for iPhone 5/4S/4/3GS kusuka iTunes isipele?
Step 1: Run isofthiwe bese bakhethe iTunes ifayela yokusekelayo.
Lapho sethula isofthiwe, khetha "Phinda kusuka iTunes Backup Ifayela" tag on the top. Futhi ke uyothola ukusebenzisana ngezansi, isofthiwe kuyokwenza scan computer yakho bese uhlu yonke ifayela iTunes isipele of iPhone yakho kwi-PC yakho, ukhethe eyodwa ofuna kukhishwe bese uchofoze "Qala Scan".
Step 2: Fumana elilahlekile noma ususiwe izithombe iPhone.
Emva the ukuskena eseqedile, wonke amafayela ku isipele ubungeke babonisa ngawe ku izigaba, izithombe zihlanganisa. Ungahlola kuqala mahhala. Bese khetha lezo okudingayo bese uchofoze inkinobho "Phinda 'ukusindisa ukuba ikhompyutha yakho.
I ezesabekayo iTunes Backup extractor akuyona nje kuphela ukukusiza umucu iPhone amafayela isipele, futhi basekele yonke imihlobo iPad and iPod. Ungasenza kutholakale 12 izinhlobo idatha phakathi izithombe zakho elahlekile, imiqophi, othintana, SMS / MMS, amanothi and Safari amabhukumaka. Unganqikazi thwebula umzila version yayo, ngoba uyobe ukuxazulula izinkathazo zakho!
Posted on July 21, 2013 May 9, 2015 Umbhali WillIzigaba iOS Data RecoveryAmathegi ukukhipha iTunes ifayela yokusekelayo ukuze alulame iPhone izithombe, Lombhalo ucashunwe ebhukwini iTunes isipele for iPhone, iTunes Backup extractor, alulame izithombe kusuka iTunes isipele
Langaphambilini post Previous: Indlela ukuze alulame idatha elahlekile emva iOS 7 ngcono
Next post Next: Idlalwa kanjani amafayela avi on Nexus 7